Warshadaha Bacaha Shiinaha iyo soosaarayaasha | SJJ
Bacaha wax iibsiga ee la isku laabi karo ee jumlada ah, bacaha aan tolmo lahayn, bacda shiraacda, boorsooyinka dhabarka lagu qaato, bay'ada u fiican, jilicsanaanta & waarta. Shey xayaysiis oo ku habboon qiimo tartan loogu talagalay xayaysiinta & ganacsiga.
Maalmahan waxay u doodaan nolosha bey'ada u habboon, waa inaan isku daynaa sida ugu yar ee suurtogalka ah inaan isticmaalno bacaha la tuuro marka aad wax iibsaneyso, markaas bacaha dib loo isticmaali karo ayaa ah beddelka ugu wanaagsan ee bacaha la tuuro. Hadiyadaha Pretty Shiny Inc. waxay siiyaan noocyo badan oo cusub oo ah bacaha maaddada ilaalinta deegaanka, soo iibinta alaabta ceyriinka ah iyo soosaarista si sahlan. Dhowr jeer ayaa loo adeegsadaa kaydinta kheyraadka.
Bacaha dib loo isticmaali karo ayaa inta badan loo adeegsan karaa nolol maalmeedkeena, boorsooyinkan ayaa noqda hab aad waxtar u leh xayeysiinta iyo kor u qaadista, sidoo kale waa hab dhaqaale oo lagu xayeysiinayo ama kor loogu qaadayo sumaddaada, ururkaaga. Waad u habayn kartaa astaan ​​kasta ama farriin kasta oo ku dul taal. Bacaha ayaa sidoo kale iibin kara hadiyado ahaan. Waan soo dhawaynaynaa naqshadahaaga moodada.
Kaalay! Nala soo xiriir si aad u hesho bacahaaga la habeeyay.
Bacaha alaabta la heli karo:
Bacaha aan duubnayn (60g/75g/90g/100g/120g/150g ayaa la heli karaa)
Bacaha Canvas (6oz/8oz/10oz ayaa la heli karaa)
Bacaha saafiga ah ee suufka ah
Bacaha dharka Oxford (210D/420D ayaa la heli karaa)
Habka Logo: Daabacaadda Silkscreen/daabacaadda dib -u -dhigga/wareejinta kulaylka/astaanta daabacaadda
Xiriirinta: Jiinyeer/xarig suuf/bir/caag caag ah
Faa'iidooyinka Nbacaha onwoven:
• Waa la dhaqi karo, waari kara oo neefsan kara, sidoo kale xasaasiyadda lidka, jilicsan oo fudud.
• Qalab calaamadeysan oo dhalaalaya si kor loogu qaado maadaama uu daabici karo astaantiisa.
• Bacaha nabdoon oo aan sun ahayn bay'ada u fiican.
• Ilaali bay'ada: isticmaalkiisu wuxuu yarayn doonaa wasakhaynta ciidda ee ay sababaan bacdu. Waa kuwo dib loo isticmaali karo oo dib loo isticmaali karo. Fududeynta kala-guuridda maadaama bacaha aan suufka lahayn ay ku burburaan 6 bilood gudahood, si ka duwan sida bacaha caaga ah oo sannado qaata si ay si buuxda u milmaan.
• Ku habboon dadka da 'kasta leh.
Faa'iidooyinka shiraac bacaha:
• Alaabta ceeriin ee bacda shiraacdu waxay ka samaysan tahay maaddo dabiici ah, taas oo u fiican bay'ada iyo noolaynta.
• Xoog leh oo waara, sidoo kale si sahlan loo nadiifiyo.
Faa'iidooyinka Cotton shabaqa bacaha:
• Qaabka moodada
• Aad u fidsan oo awood badan leh
• Fudud oo si fudud u xirxir
Faa'iidooyinka oxford maro bacaha
• Si sahlan loo dhaqo oo dhaqso loo qalajiyo
Hore: USB -ga jilicsan ee PVC
Xiga: UV Daabacaadda Birta Charms Keychains
bacaha wax lagu sawiro
Bacaha wax iibsiga ee aan tolmo lahayn
Bacaha aan duubnayn
Bacaha wax iibsiga ee aan duubnayn
Bacaha dib loo isticmaali karo
bacaha wax iibsiga